China Conveyor Roller Frames ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စက်ရုံ၊ OEM ပေးသူပေးသွင်းသူများ သဟဇာတ
Tag မော်ကွန်း: Conveyor Roller ဘောင်များ
Conveyor Roller ဘောင်များ
We pursue the management tenet of "Quality is remarkable, Company is supreme, Name is first", and will sincerely create and share success with all clientele for Conveyor Roller Frames, Hollow Rotary Vane အမျိုးအစားစတီယာရင် , Hollow Rotary Positioning Table , M100 စတီယာရင်ဂီယာသေတ္တာ , We sincerely welcome overseas customers to consult for the long-term cooperation and the mutual development.We strongly believe that we can do better and better. We've been convinced that with joint efforts, the enterprise between us will bring us mutual benefits. We are able to assure you product or service quality and aggressive cost for Conveyor Roller Frames, With its rich manufacturing experience, high-quality products, and perfect after-sale service, the company has gained good reputation and has become one of the famous enterprise specialized in manufacturing series.We sincerely hope to establish business relation with you and pursue mutual benefit.
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ လက်တွေ့ကျကျစိစစ်ပြီး၊ အသေးစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက် HEGT113 အသစ်စက်စက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများပိုမိုမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ခါးပတ်တင်းမာမှုအတွက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကိုက်ညီမည့်လုံးဝလွတ်လပ်သောသယ်ဆောင်သည့်စနစ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၂.HEGT113 သည်ဖြစ်နိုင်သမျှလျှောက်လွှာများအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အမြန်နှုန်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုထားသည်။ လိမ္မာပါးနပ်သော plug-and-play connection သည် install ကိုများစွာရိုးရှင်းစေသည်။ ဒရမ်မော်တာတစ်ခုစီသည်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီး၊ စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
ထူးခြားချက်များ ၁. ကျစ်လျစ်သောဒီဇိုင်းမော်တာကိုပြွန်ထဲသို့ပေါင်းစည်းခြင်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏ဒီဇိုင်းကိုရရှိစေသည်။ 2. စွမ်းအင်ထိရောက်စွာ Brushless drive သည်စွမ်းအင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်သည်။ Conveyor system များအနေဖြင့် pneumatic သို့မဟုတ်သမားရိုးကျ drives များမလိုအပ်ပါ။ 3.Extremely ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် application များ HEGT roller အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသော conveyor systems များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများအတွက်ဤသည်မှာ interface တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ interface မျိုးစုံမဟုတ်ပါ။
အင်္ဂါရပ်များ: ၁။ လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ အသေးစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် HEGT80 အသစ်စက်စက်သည်သံမဏိကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုသီးခြားလွတ်လပ်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးစက်ရုံများ၏မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ခါးပတ်အားတင်းရန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ၂။ HEGT80 သည်ပိုမိုကြီးမားသောအမြန်နှုန်းကိုရရှိနိုင်သောကြောင့်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ လိမ္မာပါးနပ်သော plug-and-play connection သည် install ကိုများစွာရိုးရှင်းစေသည်။ ဒရမ်မော်တာတစ်ခုစီအားအတည်ပြုပြီး၊ စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Spiral Gravity Roller Conveyor ၊ ပလပ်စတစ်သယ်ဆောင်စက်များ၊ စတီယာရင်ထိုဂီယာစတီယာရင်ထိန်သိမ်း ၊ ဂီယာမော်တော်ဆောင် ၊ ရော်ဘာသယ်ယူစက်များ၊ ပေါ်ကိုခါးပတ်ကြိတ်စက်အမျိုးအစားများ ၊ သဟဇာတ Gearhead၊ တောင်တော်အမွေးစတီယာရင်ဂီယာ ၊ သယ်ဆောင်ခါးပတ် Roller ဝက်ဝံ၊